Akhiriso Magaca, Qabiilka iyo Waxa uu ahaa Ninkii Saaka isku Qarxiyay Booliska iyo Askartii ku dhimatay Qaraxaasi meelaha ay ka kala tirsanaayeen. – Hornafrik Media Network
Akhiriso Magaca, Qabiilka iyo Waxa uu ahaa Ninkii Saaka isku Qarxiyay Booliska iyo Askartii ku dhimatay Qaraxaasi meelaha ay ka kala tirsanaayeen.
By admin	 Last updated Dec 14, 2017
Saaka ayaa Qof Naftiis Hurre ah oo isku soo xiray Qarax uu isku dhex miidaamiyay Ciidamo Boolis ah oo u diyaar garoobayay Dabaaldagga Maalinta Booliska Soomaaliyeed oo ku beegsan 20 December.
Weerarkaasi Qaraxa ah waxaa ku dhintay inta la ogyahay 19 Askari oo Boolis ah, tiro intaas ka badana way ku dhaawacmeen.
Haddaba Kumuu ahaa Ismiidaamiyuhu.?
HornAfrik ayaa illaa iyo Saaka ku daba jirtay Xogta Ismiidaamiyaha, waxayna ogaatay inuu ahaa Nin ka tirsanaa Kooxda Alshabaab oo lagu magacaabo Maxamad Nuur Guutaale oo Qabiilkiisu yahay Habargidir-Saruur.
Ninkii Isku Qarxiyay Dugsiga Sare Ee Booliska Gen Kaahiye
Guutaale oo Madaxiisa laga helay agagaarka goobta uu isku qarxiyay Ayaan sidoo kale u bandhignay Dad yaqaana oo xaqiijiyay inuu isaga yahay Qofka isqarxiyay, Waxaana Ninkan uu ka mid ahaa Maleeshiyaadka Kooxda Alshabaab ee Dagaalama, ka hor inta uusan ku biirin Kooxda Isqarxinta ee loo yaqaan Guutadda Istishaadiyiinta.
Xogta aan helnay waxay sheegaysaa in Ismiidaamiye Maxamad Nuur Guutaale uu 3-dii Maalin ee la soo dhaafay si joogta ah u imaanayay Barxadda Dugsiga Booliska Gen Kaahiye, sida ay xaqiijiyeen Saraakiil Boolis ah iyo Dadka Deegaanka, Waxaana uu ka mid ahaa Dadwayne u badan kuwa dagan agagaarka Dugsiga oo Safaf ka soo gali jiray Barxadda Toogashadda si ay halkaas uga daawadaan Gaada Ka Cayaarka Booliska isku diyaarinayay Munaasibadda 20 December.
Saaka ayuu yimid Ismiidaamiyuhu isagoo ka duwan Subaxyadii hore, xirana Dharka Kaakiga ah ee Ciidanka Booliska, iskuna soo xiray Qarax, waxaana uu soo istaagay halkii uu soo istaagi jiray, kadibna indha indhayn kadib waxa uu si fudud ku soo dhex qaaday Ciidankii ku jiray Diyaargaroowga, isagoo kadibna bartankooda isku qarxiyay.
Meelaha ay ka kala tirsanaayeen Askarta Qaraxa ku dhimatay.
19 Askari oo Boolis ah ayaa ku dhimatay Qaraxaasi, sida ku cad Warbixinta Booliska oo ay heshay HornAfrik, Waxayna ka kala tirsan yihiin Askartaasi
Saldhiga Garoonka Aadan Cadde:- 7 Askari
Saldhiga Dekadda Muqdisho:- 3 Askari
Waaxda Canshuuraha:- 6 Askari
Ururka Taliska:- 3 Askari
Isugayn:- 19 Askari
Qaraxa kadib sida looga bartay Ciidamadda Dowladda waxay caradoodii kula dul dhaceen Shacabkii iyo Qoysaskii Booliska ee daganaa Agagaarka Dugsiga Booliska Gen Kaahiye, halkaasoo ay ka billaabeen burburin Dhismayaal.
Ma jirto Digniino horay loo sii siiyay Dadka halkaasi daganaa oo Qaarkood ay ku agoontoobeen Qarixii Maanta, Sidoo kale ma jirin Qorshe horay u diyaarsanaa oo ay ahayd in Dadkaasi meesha laga saaro, balse Madaxda Booliska oo ka carooday Qarixii Maanta ayaa amray in la burburiyo Dhismayaashaasi oo u badnaa Jiingado.
Habacsanaanta Amniga ee Dugsiga.
Ma jirin hubin iyo baaritaan lagu samayn jiray Dadka Deegaanka, iyadoona loo fasaxay inay daawadaan Gaardiska Booliska ku jira Diyaargaroowga, Waana arrin ka hor imaanaysa Howlaha Ciidanka in Shacab ay goob joog ka noqdaan Goob ay ku diyaar garoobayaan Ciidan.
Ma Jirin Ciidan Illaalo ah oo sugayay Amniga Askarta aan hubaysnayn ee ku jiray Diyaargaroowga, si ay Salaan u siiyaan Madaxda Qaranka Munaasibadda Maalinta Booliska. Waxaana ay taasi sahashay in Ismiidaamiyihii Saaka isku qarxiyay inuu dhex yimaado, iyadoo aysan jirin cid istaajisay.
Sidoo kale ma jirin Baaritaan lagu sameeyay Xaafadaha ku teedsan Dugsiga Booliska Gen Kaahiye, si loo ogaado waxa ku qarsan Meelahaasi, Waxaan sidoo kale la ogayn Xogta rasmiga ah ee dadka dagan meelahaasi oo qaarkood ay Qoysas Boolis yihiin, balse ay ku jiraan Qoysas Shacab ah.
Ma jiro Xeer lagu Maamulo Xaafadaasi oo ah Xero Ciidan, Waxaana iska fudud Qoysaska Boolisku xittaa inay marti galiyaan Dad Shacab ah oo banaanka uga imaanaya, sababtoo ah maba jirto Amaro ku saabsan sida loogu noolaanayo Xaafadaasi oo ku dhex taala meel halbowle ah.
Inkastoo ay Kooxda Alshabaab fulisay Qaraxa, sheegatayna haddana waxay Saraakiil Boolis ah oo la hadlay HornAfrik qabaan in Masuuliyadda 1-aad ay leeyihiin Madaxda Booliska oo Labo arrimoodba ku fashilmay:-
1- waxay ogaan waayeen Weerar heerkaas le’eg oo ku soo socda Mid ka mida Xarumahooda ugu waawayn, iyadoo Waliba aan xittaa ka war helin Maalmihii ugu dambeeyay ee la sahminayay Xeradda.
2-Waxay sugi waayeen Ammaanka Xeradda oo si fudud lagu gaaray Bartilmaameedkii la rabay.
Goobta uu Maanta Qaraxu ka dhacay waxaa Usbuuca Soo socda tagi lahaa Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah, Maxamad Cabdullaahi Farmaajo, Raiisul Wasaare Xasan Khayre, Gudoomiyayaasha Labada Aqal ee Baarlamaanka, Xubanaha Golayaasha Xukuumadda iyo Baarlamaanka, Taliyayaasha Ciidamadda Qalabka Sidda, iyo Diblomaasiyiin lagu casuumay.
Qaraxan waxa uu sidoo kale ku soo beegmayaa, iyadoo uusan Dalku lahayn Taliyayaal Boolis iyo Nabadsugid, Waxaana si KMG ah u haya Xilalkaasi Ku Simayaal.
Mareynkanka Oo Amray In Baaritaan Cusub Lagu Sameeyo Weerarkii Bariire